Mpanangona loko – Color Picker
Home > Mpanangona loko
Picker loko sary an-tserasera
Ity fitaovana loko an-tserasera maimaim-poana ity, tsy mila mametraka izany ianao amin’ny sary na rakitra sary avy amin’ny solosaina finday, smartphone, aorian’ny fandefasana ilay sary dia hahazo ny rakitra loko.
Safidio ny loko ary alaivo ny kaody loko RGB hex ary kaody volon’ny HSV, Makà loko HTML avy amin’ny sary rehetra mitovy amin’ito satria ity fitaovana an-tserasera tsotra ity dia mahita marika volon-koditra HTML ho an’ny tranonkalanao mampiasa ny loko loko, tabilao loko ary anarana HTML. fomba mitovy amin’ny kaody loko Hex, RGB ary HSL
Handray ny sary ary afaka mifidy ny loko amin’ny teboka tsirairay amin’ny sary ianao. Ny kaody loko voafantina sy efa nomanina dia ny lisitra eto ambany ary Misafidy ny lokonao!
Zarao ny mpividy loko miloko aorian’ny namanao!